ဂျပန်နိုင်ငံက အရေးပေါ်ကာလအဖြစ် ကြေညာမည် | Myanmar Business Today
Home Business International ဂျပန်နိုင်ငံက အရေးပေါ်ကာလအဖြစ် ကြေညာမည်
ဂျပန်နိုင်ငံက အရေးပေါ်ကာလအဖြစ် ကြေညာမည်
ဂျပန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးအနေဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အရေးပေါ်ကာလအဖြစ် လာမည့် အင်္ဂါနေ့တွင် ကြေညာသွားဖွယ် ရှိနေပြီး ၎င်း၏ အစီအမံများကိုလည်း ယနေ့ တနင်္လာနေ့တွင် ကြေညာသွားဖွယ်ရှိနေသည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အကျုံးဝင်စေရန်ရည်ရွယ်၍ ပြင်ဆင်ထားသော ဥပဒေတွင် ဝန်ကြီချုပ်အနေဖြင့် ရောဂါတစ်ခုသည် နိုင်ငံသားများအပေါ် အသက်အန္တရာယ်ကြီးမားစွာ ကျရောက်နိုင်လျှင်၊ ရောဂါပိုးလျှင်မြန်စွာ ကူးစက်ခြင်းက စီးပွားရေးအပေါ် ကြီးမားသော ဆိုးကျိုး သက်ရောက်စေနိုင်လျှင် အရေးပေါ်ကာလအဖြစ် ကြေညာနိုင်သည်။ ယခုပေါ်ပေါက်နေသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် စီးပွားရေး ကျဆင်းနိုင်ခြေများ မြင့်မားနေသည်။
အရေးပေါ်ကာလအဖြစ် ကြေညာပါက ရောဂါပိုး ဖြစ်ပွားရာ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသရှိ မြို့တော်ဝန်များအနေဖြင့် လူတွေကို အိမ်ထဲတွင် နေခိုင်းခြင်း၊ အခမ်းအနားများ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ကျောင်းနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ ဌာနများ ပိတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
TOKYO, April6(Reuters) – Japanese Prime Minister Shinzo Abe will declareastate of emergency over the coronavirus as early as Tuesday and will likely announce his plans to do so on Monday, the Yomiuri newspaper reported.
Underalaw revised in March to cover the coronavirus, the prime minister can declareastate of emergency if the disease posesa“grave danger” to lives and if its rapid spread could haveahuge impact on the economy. The virus has already increased Japan’s recession risk.
The move would give governors in hard-hit regions added authority to ask people to stay home, cancel events, and close schools and other public facilities. (Reporting by Chang-Ran Kim; Editing by Tom Hogue)
Previous articleကန်ဒေါ်လာ ခုနှစ်သိန်းတန်ဖိုးရှိ COVID-19 ရောဂါစမ်းသပ်ရေးပစ္စည်းများ ဗြိတိန်၊ ဆွီဒင်၊ အမေရိကန်နှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတို့က ကူညီ
Next articleနယူးယောက်တိရစ္ဆာန်ရုံရှိ ကျားတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တွေ့ရှိ
MYD: can it challenge the Myanmar Kyat?
Britain approves spending of 3.5 billion pounds on railway bailout